२० लाख पर्यटक ल्याउँछौं : मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी
विद्यार्थी राजनीति, पहिलो संविधानसभा निर्वाचन जित्दादेखि ससंदको विकास समितिको सभापति हुँदा पनि उनी सधैं चर्चामा थिए। समर्थकहरु उनलाई काम गर्ने र विरोधी चर्चामा रमाउने आरोप लगाउँछन्। कास्कीबाट तीनपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर पहिलोपटक कार्यकारी भूमिका पाएका उनी आफैंले भने अहिले काम गर्दिन भन्ने छुट नै नभएको बताउँदै आएका छन्। सरकार गठन भएको सय दिनभित्र गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेका कामहरु, पर्यटन क्षेत्रका समस्या, उनका योजना र रणनीतिबारे पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अन्तर्वार्ता।
सय दिन सकिन पनि १८ दिन बाँकी छ, १८ बुँदामा सार्वजनिक गर्नुभएको ८२ वटा कामको प्रगति कस्तो भइरहेको छ ?
चर्चाका लागि नियमित एयरपोर्ट अनुगमनमा जानु हुन्छ भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
ब्युरोक्रेसीको स्पिरिट, कानुनी प्रक्रिया र तपाईँले काम गर्न चाहेको स्पिडमा तादात्म्यता मिलिरहेको छ ?
पूर्वाधार विकासबिना पर्यटन उद्योगको विकास सम्भव छैन। एयरपोर्टबाट कलंकी पार गर्न ३ घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ।यसको समाधान कसरी हुन हुन्छ ?
नेपाल पर्यटन बोर्डले पूर्वाधार विकासका खुद्रे योजनामा लगानी गर्छ। पर्यटन बोर्डका खुद्रे योजना राजनीतिक कारणले राखिएको पर्यटन बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्। त्यस्तो खुद्रे लगानी हाम्रो आवश्यकता हो त ?
विश्वमा वार्षिक करोड भन्दा बढी पर्यटक घुम्ने शहर धेरै छन्, हाम्रो प्राथमिकता देशैभर पर्यटकीय स्थल बनाउने हुनुपर्छ कि नमूना गन्तव्य बनाउने ?
‘चार पांग्रा गुड्ने बाटोमा दुई खुट्टाले हिड्न रमाइलो हुँदैन भनेर पदयात्रीहरुले टिप्पणी गर्ने गरेको सुनिन्छ। ट्रेकिङका लागि चर्चित रुटहरुबाटै सडकका ट्रयाक खोलिएका छन् यसले हाम्रो ट्रेकिङ पर्यटनमा प्रभाव पार्दैन ?
काठमाडौँमै होमस्टे स्थापना भएका छन्, यो त होमस्टेको आधारभूत मान्यताको विपरित भएन र ?
पूर्वाधारको विकास दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, हाम्रा पर्यटन पूर्वाधारहरु दिगो विकासको अवधारणा अनुसार विकास भएका छन् ?
दिगो विकासको अवधारणाले पूर्वाधारमा स्थानीयको सहभागिता र स्वामित्व हुनुपर्छ भन्छ, तर हाम्रो देशमा सार्वजनिक जमिनमा बनाईएका पूर्वाधारमा पनि सीमित व्यवसायीको स्वामित्व छ नि ?
तराईका सीमा क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको संख्या बढ्दो क्रममा छ, कानुनी रुपमा भारु ५ सय र २ हजारका नोटमा कारोबार गर्न बन्देज छ। तर पनि सीमा क्षेत्रका होटल रेस्टुरेन्टले ती नोटमा कारोबार गरिरहेका हुन्छन्, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
निजी क्षेत्रका विमान कम्पनी प्लेन उडाएर नाफा कमाउन सक्ने तर सरकारी नेपाल वायु सेवा निगमले नसक्ने के कारण पाउनु भयो ?
नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज उडाएरै सरकारलाई लाभांश खुवाउने संस्था बनाउन के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीजस्तो सीमित स्रोत भएको देशको प्राथमिकता सानो आन्तरिक विमानस्थलमा हुनुपर्छ कि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ?
उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग अलग हुनु पर्छ भनेर चर्चा भएको पनि धेरै भयो तर कार्यान्वयनमा किन आउन सकेको छैन ?
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संचालक समितिमा नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक हुने व्यवस्था छ, यसले नागरिक उड्डयनको काम निष्पक्ष हुन्छ भनेर मान्न सकिन्छ ?
टुर गाइड/ट्रेकिङ गाईड/कुक/ लगायतको तालिम काठमाडौंबाट मात्रै दिएर हुन्छ ?
पर्यटनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास गर्ने नाथमका तालिमहरु काठमाडौं बाहिर लैजानु पर्छ होला नि ?
पर्यटन विश्वबिद्यालय तपाईको प्राथामिकतामा परेको छ, कहिले सम्म स्थापना हुन्छ त विश्वबिद्यालय ?